ईमेज अवार्डको लागि आजबाट आवेदन खुला गरिँदै « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
ईमेज अवार्डको लागि आजबाट आवेदन खुला गरिँदै
२४ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १०:२९
काठमाडौं । यस वर्षको टुबोर्ग इमेज अवार्डको २२ औं संस्करणको लागि आवेदन फर्म खुल्ला गरिँदै छ ।
ईमेज च्यानलबाट दुई दशक अघिदेखि वार्षिक रुपमा आयोजना हुँदै आएको राष्ट्रकै संगीत वृतको सबैभन्दा ठूलो अवार्डको २२ औ संस्करणका लागि आवेदन फर्म आज मंगलबारबाट खुल्ला गरिन लागिएको हाे ।
यस वर्ष गीत, संगीत, रचना लगायत म्युजिक भिडियो र पब्लिक च्वाईस अवार्ड समूह गरि जम्मा १५ विधाका लागि आवेदन फर्म खुल्ला गरिएको ईमेज च्यानल प्रा.लि. का अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक आर.के. मानन्धरले जानकारी दिनुभएको छ ।
यस पटक २०७६ साल असार १ गतेदेखि २०७९ जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक भई दर्ता भएका नेपाली गीत र म्युजिक भिडियोलाई मनोनयनमा समावेश गरिने छ । प्रत्येक विधाको उत्कृष्ट पाँँच मनोनयनका लागि नेपाली सांगितिक क्षेत्रका विज्ञहरुबाट प्राविधिक भोट ( Technical Vote) लिईने छ ।
ईमेज अर्वाडमा यस वर्ष नेपहप र्‍याप पर्फमेन्स पनि थप गरिएको छ । यस पटक मात्र एक विधा पब्लिक च्वाईस अर्वाड (Public Choice Award) का लागि भोटिङ्ग खुला हुनेछ । यस विधामा जसले सबैभन्दा बढि भोट प्राप्त गर्दछ, सोही गीतलाई विजेता घोषणा गरिनेछ ।
२०७६ यता कोरोना महामारीका कारण निरन्तर हुन नसकेको अवार्डलाई फेरि निरन्तरता दिइएको हो । समस्त गीत संगीत प्रेमीहरुलाई यस अवार्डमा सहभागि हुन आयोजक इमेज च्यानलले आग्रह गरेको छ ।
आवेदन फर्मको शुल्क १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । फर्म ईमेज खबर डट कमबाट पनि डाउनलोड गर्न सकिने छ । आवेदन फर्म बुझाउने अन्तिम मिति २०७९ असार २० गतेसम्म तोकिएको छ ।
आवेदन फर्मको नमूना :